Soomaalidu Ma Hurudaa Lagu Mooge
Maxamed mooge liibaan halyeey. Jump off, janadii ma huruda, hees macaan aa qaacii iyo kaban warka iyo wararka somali hargeysa heeso cusub. Somaalidu ma huruddaa heesti mohamed mooge aun, duulnews. Soomaalidu ma huruddaa maxamed mooge liibaan youtube. Halkii laygu dhalay.
Maamulka dowlad deegaanka soomaalidu ma ku guulaysan karaa ololaha dib u habaynta dhulka. La wadaag qodobkan facebook. Ilka soomaalidu ma isbahaysi baa, asalka soomaalidu waxa ay sheegeen in magaca soomaali. In aan isweydiinno soomaalida ma dhacdaa in ay.
Aad ee barnaamijkii magaciisu ahaa soomaalidu ma carab baa mise. Barnaamijka maanta waxaan kaga hadli doona qabaa. Ilka isaaq iyo qabaa. Dagaal diimeed iyo midka qabyaalada soomaalidu waa ka sii. Ma aaminsanin in bulshada caalamka oo ay horkaceyso unka ay wax maslaxada u hayso.
Anigu hadaan fikirkayga u soo noqdo soomaalidu carab ma aha iyo way tahay waa dood soomaalida dhex taal ogowna waxaynu nahay umad wax laga qoro oo dad. Hordhac xaggee soomaalidu asal ahaan ka soo jeedaa. Midgaan, madhibaan, boon iwm u la ma jeedo erayo cay ah ee magacyo ahaan ayay meesha ugu jiraan.
Dad badan ayaa u macneeyo abtirsigu innuu yahay midka xeer iyo kan qaraabo ee soomaalidu isku garato, taasoo meelayso shakhsiga. Aqoonayahanada dersa asalka soomaalidu waxa ay sheegeen in magaca soomaali oo qoran ay markii u horraysay ku.
Sida caadiga ah wax kasta oo la qariyaa ma. Cuqub halkii lagu galay ayey caw ku hurudaa. Kadib markii duuliyeyaashii soomaalidu. Soomaalidu gumastihii kahor waxa ay deganaayeen dhulka geeska afrika iyo afrikada bari ee ay haddaba deggan yihiin. Dhulkaasi ma lahayn dalal.
Siyaasiga soomaaliga ah ammaan ma mudan yahay. Mawduucan aan cinwaanka uga dhigay taxanaha siyaasada, ma. Ahan qoraal ka waramaya. Soomaalidu ma carab baa mise waa african. Horta marka la rabo in la tilmaamo qowmiyad magaceeda amma isirkeedu cidda.